आफन्तको भरमा मात्रै व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी आफन्तको भरमा मात्रै व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा
के तपाईं व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि विदेशमा नजिकका आफन्त छन् भने मात्रै व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ । एजेण्ट तथा दलालको भरमा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ । सरकारले पनि आफु नजिकका नातागोता जस्तै, बाबुआमा, छोराछोरी, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, पतिपत्नीको भरमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान दिने निर्णय गरेको छ । आफु नजिकका नातेदारमार्फत रोजगारीमा जाँदा जोखिम कम हुने भएकाले सो व्यवस्था लागू गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज दाहालले बताए । ‘हाम्रो काम भनेको नेपाली कामदारलाई सस्तो लागत र सुरक्षित तरीकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय एजेण्टले व्यावसायिक रूपमै व्यक्तिगत तरीकाबाट कामदार पठाउन थालेपछि उक्त व्यवस्था गरेको हो ।’
व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा नाताको प्रमाणपत्र र रोजगारदाताको विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । नबुझाएमा जान पाइँदैन । सरकारले भिसा र करारनामाको भरमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था हटाएको छ । केही समययता व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेको विभागले बताएको छ । नाता प्रमाणित नगरीकन व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान दिँदा कतिपय म्यानपावर कम्पनीले संस्थागत रूपमा ल्याएको मागपत्रमा व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउन थालेको पाइएको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी भएपछि यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिले चलखेल गर्न पाउने छैनन्,’ उनले भने । सरकारले व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारको हकमा सो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
व्यक्तिगत प्रयासमा भन्दै विभागबाट श्रम स्वीकृति लिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कामदारले एजेण्टलाई झण्डै रू. १ लाखभन्दा बढी बुझाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार र नेपालमा रहेका दलालको मिलेमतोमा यस्तो हुने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो तरीकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अलपत्र पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
केही समययता कतार र कुवेतमा अलपत्र परेका कामदारमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाटै गएकाअहरू भएको विभागले बताएको छ । कतिपय व्यक्तिले नक्कली नाता प्रमाणपत्र बनाएर पनि दूतावासमा प्रमाणीकरण गर्न लैजाने गरेका छन् । त्यस्ता नाता प्रमाणको भरमा रोजगारीमा अलपत्र पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । पैसा तिरेर व्यक्तिगत प्रयासमा जानुभन्दा संस्थागत रूपमा म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानु उपयुक्त हुने दाहाल बताउँछन् ।
व्यक्तिगत रूपमा रोजगजगारीमा जान दूतावासमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
सम्बन्धित देशको सरकारबाट जारी भएको भिसाको प्रतिलिपि
रोजगारका सेवाशर्त, सुविधा र तलब उल्लेख भएको करारनामा
रोजगारदाताको इजाजत पत्रको प्रतिलिपि वा उसको परिचयपत्र
संस्थामा जाने कामदारको हकमा कम्पनीको सङ्क्षिप्त विवरण
सम्बन्धित देशको सरकारले रोजगारदातालाई दिएको स्वीकृति पत्र
भिसा सिफारिश गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित देशमा बस्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र
नाता खुल्ने कागजात